के हो पशुपतिमा राखिएको ९६ किलो सुनको जलहरी ? « Mechipost.com
के हो पशुपतिमा राखिएको ९६ किलो सुनको जलहरी ?
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २३:२४
फिदिम । सर्वोच्च अदालतले रोक्न भनेर अन्तरिम आदेश दिएकै दिन बुधबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा ९६ किलो सुनको जलहरी राखियो। यसमा १२ किलो सुन थप्न बाँकी छ, जुन विस्तारै राखिने पशुपतिका मुख्य पूजारीमध्ये एकले जानकारी दिए।
त्यसअघि फागुन १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गरी १०८ किलो जलहरी राख्न साइत गरेकी थिइन्। पुरातात्विक सम्पदामा कुनै पनि चिज चलाउन वा थपघट गर्न नपाइने कानुन छ। यसैमा टेकेर अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसमेत उल्लंघन गर्दै पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
मन्दिरका चार जना मुख्य पूजारीले मात्र छोएर राख्न मिल्ने जलहरी सर्वसाधारणले सजिलै देख्दैनन्। जुन ठाउँमा उभिएर सर्वसाधारणले पशुपति दर्शन गर्छन्, त्यहाँबाट जलहरी देखिँदैन। पशुपतिमा पश्चिमी ढोका मात्र भक्तजनका लागि खुला हुन्छ। तीर्थारूले ढोकामै गएर आफैंले फूलपाती चढाउन पाउँदैनन्। त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले दुई मिटर वरैबाट फूलपाती मन्दिरको ढोकामा छुवाइदिन्छन्, जल चढाइदिन्छन्।
भक्तजनको भीडभाडबीच कतिले त शिवलिंगको राम्ररी दर्शन गर्न पनि पाएका हुँदैनन्, यस्तोमा जलहरी देख्नु टाढाको कुरा। कसैले घाँटी तन्काएर हेर्‍यो भने मात्र मुश्किलले जलहरी देखिन्छ। पछिल्लो केही दिनदेखि अत्यन्त चर्चामा रहेको यो जलहरी के हो ? कस्तो हुन्छ ? कहाँ राखिन्छ ? धेरैलाई यसमा कौतूहल छ।
यस्तै द्विविधा र भ्रमबीच हामी केही पत्रकारले मन्दिरको चारै ढोकाबाट भर्खरै राखिएको जलहरी हेर्ने मौका पायौं। यो न मन्दिरको भित्री छानामा राखिन्छ, न शिवलिंगमाथि छाताजसरी ओढाइन्छ। खासमा यो शिवलिंगको तल्लो भाग बेरेर झकिझकाउ पार्ने कलात्मक गहना हो।
जलहरीबाट बगेको तरल पदार्थ बह्मनाल हुँदै बाग्मतीमा गएर मिसिन्छ। भक्तजनलाई अभिषेक गरिने जल जलहरीबाटै लिइने पूजारीहरू बताउँछन्। पशुपति शिवलिंगको तल्लो भागमा बासुकी नाग छ। नागमाथि करिब पाँच इन्च उचाइमा शिवलिंगको गर्भगृह छ। पाँच मिटर गोलाइ रहेको यो गर्भगृहलाई सुनको पातोले मोरिएको छ।
“यहाँ दुई तह तामा र दुई तह चाँदीको जलहरी थियो। अहिले त्यसैको माथिल्लो तहमा सुनको जलहरी राखिएको हो”, उनले भने। चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले सुनको जलहरी राखिएको उनले बताए। यसले शिवलिंगको गर्भगृहलाई चम्किलो पारेको छ।
“भोलि देशलाई आर्थिक आपत परेका खण्डमा यो सुनको जलहरी प्रयोग गर्न मिल्छ”, उनले भने, “यसनिम्ति क्षमापूजा भने गर्नुपर्छ।” (सेतोपाटी डटकममा समिक्षा अधिकारीले लेखेको समाचार सामग्री साभार ।)